Ungawana Sei YouTube Yekutanga Mudzidzi Discount? - Zvipo
Ungawana Sei YouTube Yekutanga Mudzidzi Discount?
YouTube ichangobva kuzivisa vadzidzi zvirongwa zvekudzikisa kunyorera kwavo kuIndia nedzimwe nyika. Iyo YouTube Premium uye YouTube mimhanzi inogamuchira mavhidhiyo uye odhiyo zvikamu zvakasiyana.
Ose masevhisi anowanikwa pane Android uye iOS zvishandiso. Vadzidzi vakanyoresa kumayunivhesiti uye makoreji anozivikanwa vanogona kuwana iwo masevhisi pamitengo yakadzikiswa. Iye munhu anowana iyo yekutanga nhengo pamutengo wemitengo anogona kuwana isingashambadziro vhezheni yeYouTube yepakutanga uye YouTube.
Ndiani Anokodzera kuYouTube Premium Student Discount?
Vadzidzi vakanyoresa yakazara-yenguva yepamusoro dzidzo Institute muIndia, uye dzimwe nyika dzinogona kusaina iyo YouTube premium mudzidzi dhisikaundi. Nekudaro, iyo yakaderedzwa kunyoreswa kweiyo premium account inoshanda kwemakore mana.
Vadzidzi vanodawo kuongorora zvekare account yavo uye kukodzera gore rega.
Chii chinosanganisirwa muYouTube Premium Mudzidzi Discount?
Vadzidzi vanowana yemwedzi mumwe-yemahara kuyedzwa uye vanofanirwa kubhadhara chete hafu yemwedzi yemwedzi yekunyorera huwandu. MuIndia, YouTube Music inowanikwa paRs 59 chete pamwedzi, uye iyo YouTube premium vhidhiyo masevhisi anowanikwa paRs 79 pamwedzi.
Nekudaro, hazvisati zvanyatsojeka kuti aya mitengo yemutengo ichave yakafanana pane zvishandiso zveApple uye zvishandiso zveIOS kana kwete. Mudzidzi ane mitezo yepamberi anokwanisa kuwana ese masevhisi, shanduro dzisina kushambadzira, uye zvivakwa zvekurodha mimhanzi zvekuona mafirimu uye kuteerera mimhanzi isingaenderane.
Matanho Ekutora YouTube Yekutanga Mudzidzi Discount
Iyo SheerID inosimbisa YouTube sosi uye kukodzera. Usati wasaina, tarisa kuti kana chikoro chako chakabatanidzwa mune peji revadzidzi reYouTube Music Premium uye YouTube Premium.
Kana chikoro chako chikabatanidzwa enda mberi kunyoresa uye uteedzere nhanho idzi:
Shanyira iyo YouTube Premium saiti uye tinya pane inosvika peji. Tevere, tinya paZama IT Mahara.
Mushure meizvozvo, meseji ichabuda-kumusoro pachiratidziro iwe chaunotungamirwa kuti chiongororwe kuSheerID mushure mekudzvanya kuenderera.
Zadza nyika, zita rekuyunivhesiti, zita rekutanga, uye zita rekupedzisira. Zvakare, ita shuwa kuzadza email kero uye zuva rekuzvarwa. Dzvanya pabhokisi kuti ubvumire maitiro ekuongorora.
Wobva wadzvanya pane inotevera mushure mekuzadza ruzivo.
Paunenge uchizadza fomu yekusaina, dzimwe nguva SheerID inotsvaga rumwe ruzivo senge mudzidzi ID kuongorora, zvinyorwa, uye mamwe akawanda magwaro ekuyunivhesiti. Iwe unofanirwa kurodha mafaera ese uye tinya pane kuendesa.
Ukangotumira fomu, YouTube inoti, uchagashira email kutsigirwa munguva pfupi mukati memaminitsi makumi maviri nemapfumbamwe. Dzimwe nguva zvinotora anopfuura maawa makumi mana nemasere kusimbisa.
Kana iko kuongorora kweakaundi kwabudirira, ipapo SheerID inokudzosera iwe papeji rekusaina reiyo YouTube premium account.
Pano, iwe unofanirwa kupinda muakaundi yeYouTube.
Dzvanya paprofile, sarudza iyo yakabhadharwa nhengo, uye uteedzere rairo inokurudzira pachiratidziri.
Sarudza nzira yekubhadhara. Mushure meizvozvo, tinya kutanga-mwedzi-mumwe kuyedzwa. Kana muyedzo wemahara wapera, ipapo YouTube ichakubhadharisa bhiri rekunyorera pamwedzi pamitero yakadzikiswa.
Ndizvozvo varume! kana iwe uchiziva chero imwe nzira yekuti ungawana sei yakanyanya kutapudzwa YouTube Premium ita kuti tizive mune chikamu chemashoko pazasi .. Thanks nekuverenga
Zvimwe Zvidimbu Zvevadzidzi Unogona kutarisa:
Tidal Mudzidzi Discount
Android emulator kurodha pasi windows 10
amazon 1 mwedzi yemahara kuyedzwa
yemahara live mitambo yekutenderera mawebhusaiti
rudzii rwehurongwa runokugonesa kutamba mimhanzi uye kuona mafirimu uye terevhizheni?
emahara emafirimu online pasina kurodha mahara pasina nhengo